မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သူတောင်းစားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည့် မြန်မာကလေးငယ် ၆ဦး အကူအညီတောင်းခံ | B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association
← ခိုလှုံရာမဲ့ ကလေးများ အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေ
The plight of migrant workers →
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် သူတောင်းစားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည့် မြန်မာကလေးငယ် ၆ဦး အကူအညီတောင်းခံ	Posted on April 19, 2010	by bmta05 ဧပြီ ၁၉
တောင်းစားသူအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရာမှ ဖမ်းဆီးခံရသဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကလန်တန်းပြည်နယ်၊ တန္နာမေရကမ့် kelantan ပြည်နယ်၊ tanah merah Camp ထဲတွင် ကယ်ဆယ်သူမရှိပဲ ဒုက္ခရောက်နေသည့် မြန်မာကလေးငယ်၆ဦင်္းတို့ က ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအသင်းသို့ ဆက်သွယ် အကူအညီ တောင်းခံလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပိုက်ဆံတောင်းသည့်် အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရသည့် ကလေး၆ဦးအနက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒလမြို့နယ်မှ အသက်၁၄နှစ်အရွယ် မင်းယုစန်း အကျဉ်းသား နံပါတ် (၅၃၅၄၅) မှာ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်း ပန်းတနော်မှ တင်မျိုးထက်(၅၃၃၂၉) ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမှ နေလင်းဦး (၅၃၅၄၄) မန္တလေးတိုင်းမတ္တရာမှ ကျော်သူလင်း(၅၃၅၄၆) နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာမှ မောင်အောင်ဝင်း(၅၂၆၇၉) တို့မှာ အသက်၁၂နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ မအေးမြထွေးဆိုသည့် ၁၀နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးမှာ မောင်ကျော်သူလင်းထက် အသက်ငယ်သော်လည်း တစ်နေရာတည်းမှ ဖြစ်ရုံမက အဒေါ် တော်စပ်ကြောင်း သူကပြောပြသည်။
အခြားသူများမှာ အကျဉ်းသားနံပါတ်များ ရရှိထားပြီးဖြစ်သော်လည်း မအေးမြထွေးမှာ မိန်းကလေးဆောင်တွင် နေထိုင်ရသူဖြစ်သဖြင့် ဓါတ်ပုံနှင့် အကျဉ်းသားနံပါတ်မရရှိခဲ့ပါ။
အကျဉ်းစခန်းထဲတွင်ရောက်ရှိနေသည့် ကလေး၆ဦးအနက် နောက်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နေ ဦးသာလှိုင်နှင့် ဒေါ်မျိုးမျိုးစိန်တို့၏ သား အသက်၁၂နှစ် အရွယ် မောင်အောင်ကိုဝင်းက “မူဆလင်ကုလားလူမျိုး ဦးအတ္တစ်နဲ့ မအေးရီတို့ ဇနီးမောင်နှံ ၂ဦးက ရန်ကုန်မှာ သတင်းစာရောင်းရမယ်ဆိုပြီး ခေါ်လာတာပါ၊ အမေ့ကို ကျပ်ငွေနှစ်သောင်း ပေးခဲ့ပါတယ်၊ မလေးရှားကိုရောက်တော့ သားတို့ကို သူတောင်းစား လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ရင်းဂစ်၁၀၀ရအောင် တောင်းခိုင်းပါတယ်၊ မရရင် ရိုက်ပါတယ်။ ကြက်ဥပြုတ်နဲ့ပဲ ကျွေးပါတယ်။ ထမင်းလည်း ၀၀လင်လင် မစားရဘူး၊ ဒီမှာလည်း မစားရဘူး၊ သားတို့ ကို လာထုတ်ပေးကြပါ”ဟု ပြောသည်။
ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအသင်းမှ နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဦးမျိုးနိုင်က “ကျနော်တို့ အဖွဲ့ က နေရာတိုင်းကို သွားလာ လှုပ်ရှားလို့ ရနိုင်တဲ့အဖွဲ့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ငွေကြေးအင်အား တောင့်တင်းတဲ့အဖွဲ့ လည်း မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်တို့ ကော်မီတီဝင်တွေ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေလေးတွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အကူအညီပေးပါတယ်။ ဒီကိစ္စရပ်က ကြီးမားကျယ်ပြန့်တယ်၊ ကျနော်တို့ တစ်ဖွဲ့ တည်း မလုပ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ က မဲခေါင်မြစ်ဝှန်းဒေသ အင်ဂျီအိုနဲ့ အလုပ်သမားများကွန်ယက်မှာ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်တာကြောင့် လုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကိုလည်း တင်ပြမယ်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်။ ကလေးလေးတွေကို ကယ်တင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်၊၊ ပြီးတော့ အခြားလူတွေကလည်း မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မိဘတွေကိုလည်း ဆက်သွယ်ပြီးတော့၊ အကူအညီရှာပေးကြပါ”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ တန္နာမေရ ကမ့်ထဲတွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ငြိစွန်းပြီး မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လိုသည့် လူများစာရင်းတွင် ဖေါင်ဖြည့်မထားသည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ လည်းရှိသည်။ မိုးဝင်းအသက်၂၉နှစ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း(၅၃၅၀၆)။ရှာရစ် ဧရာဝတီတိုင်း (၅၂၆၇၈)၊ မိုးအောင်၊အသက်၃၉နှစ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကိုဖိုးချမ်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ (၅၃၀၃၃) အပါအ၀င်မြန်မာ၃၀ ၀န်းကျင်းခန့်မှာ တစ်နှစ် ကျော်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ အသိအမှတ်ပြုခြင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းမှ ကိုရှာရစ်ကပြောသည်။
“ကျနော်တို့ မလေးရှားမှာ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် လှုပ်ရှားကြပါတယ်။ မလေးရှားမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂက၊ ဗမာတွေအပါ အ၀င် အခြားတိုင်းရင်းသားတွေကို လုံးဝအသိအမှတ်မပြုဘူး၊ မြန်မာဆိုတာနဲ့ ခေါင်းပဲညိတ်ပြီးတော့ ဘာမှကို မမေးတော့တာဗျ။ ချင်းတွေကို အစပိုင်းကတော့နဲနဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်။
ကျနော်လည်း ကုလားတွေကိုပဲ အသိအမှတ်ပြုနေတော့ ရှာရစ် ဆိုပြီး နာမည် ပေးလိုက်တယ်၊ ကျနော်ဗမာပါ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ ယူအင်လည်း မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်တာ မရှိဘူး၊ ကျနော်တို့က တိုင်းပြည်ပြန်ရင်လည်း အဖမ်းခံရမယ်၊ တတိယနိုင်ငံလည်း သွားမရ၊ မလေးရှားမှာလည်း နေလို့မရ ကမ့်ထဲမှာ ဘ၀သေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါဗျာ”ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
This entry was posted in သတင်း, Burmese pages only. Bookmark the permalink.	← ခိုလှုံရာမဲ့ ကလေးများ အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေ